सप्तकोशी बैंकमा १५ करोड ७० लाख हिनामिना: हराएको पैसा सिइओका आफन्तको बैंक खातामा :: राजु अधिकारी :: Setopati
सप्तकोशी बैंकमा १५ करोड ७० लाख हिनामिना: हराएको पैसा सिइओका आफन्तको बैंक खातामा
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा हिनामिना भएको १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बैंककै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका आफन्तको नाममा जम्मा भएको खुलेको छ ।
यसले बैंककै उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नतामा रकम हिनामिना भएको रहस्य खुलेको हो।
सप्तकोशी बैंककै कर्मचारी वृत्तबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा यो कुरा उल्लेख छ। बेनामी उजुरी दर्ता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन थालेको थियो। त्यसपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो।
धनकुटा प्रधान कार्यालय भएको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको कर्पोरेट कार्यालय विराटनगरमा छ। त्यही कर्पोरेट कार्यालयबाट रेमिट्यान्सको १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको खुलेको थियो। यति ठूलो रकम पछिल्लो ६ वर्षयता हिनामिना हुँदा बैंक बेखबर जस्तै देखिनु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै आफन्तको खातामा अधिकांश पैसा ‘ट्रान्सफर’ भएको देखिनुले यो प्रकरणमा सिइओ लगायतका उच्च अधिकारीहरू शंकाको घेरामा परेका छन्।
बैंकको रेमिट शाखाबाट भएको यो हिनामिनामा बबिता सुवेदीको नाममा मात्रै १४ करोडभन्दा बढी रकम ‘ट्रान्सफर’ भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। बबिता सिइओ नविन सुवेदीकी दिदी हुन्। उजुरीका अनुसार सन् २०१६ देखि २०२१ अगष्ट २ तारिखसम्ममा बबिताको नाममा रहेको प्राइम बैंकको खाता नं. ९९९००००१५००१५ बाट १४ करोड गैरकानुनी ढंगबाट निकालिएको छ।
बबिताको नाममा फर्जी खाता सिइओ सुवेदी र हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रेमिट शाखा प्रमुख हिमाल भट्टराईले बनाएको आरोप लागेको छ।
रेमिट शाखाका प्रमुख भट्टराई पनि सिइओ सुवेदीका नातेदार हुन्। भट्टराई उनका फुपुका छोरा हुन्।
हिनामिना भएको रकममध्ये धेरै बबिताको खातामा र हिमाल भट्टराईको विभिन्न पाँच वटा बैंकको खातामा एक करोड रुपैयाँ जम्मा भएको राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
यसैगरी सिइओ सुवेदीकी भाउजू भगवती सुवेदी, सालो साजन पोखरेल जेठी सासू बानी पोखरेल लगायतको खातामा रकम पठाएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
‘उक्त खाता पनि अरू नै व्यक्तिबाट सञ्चालन गरी कारोबार भएकोले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ।
यही प्रकरणमा बैंकको कर्पोरेट कार्यालयका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई जिल्ला प्रहरी मोरङले नियन्त्रणमा लिएर यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।
बैंककै एक कर्मचारीले गोप्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा आर्थिक हिनामिना भइरहेकोबारे उजुरी गरेपछि मंसिर पहिलो साता बैंकको रकम हिनामिना भएको खुलेको हो।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आरोपित भट्टराईका आफन्तले सिइओ नविन सुवेदीको योजनामा बैंकमा घोटाला भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
विराटनगरमा पत्रकारहरूसित कुरा गर्दै भट्टराईका परिवारजनले सिइओ सुवेदीकै योजनामा बैंकको रकम हिनामिना भएको आरोप लगाएका हुन्।
बैंकमा यति ठूलो रकम अपचलन हुँदासमेत बैंकका सञ्चालक भने बेखबरजस्तै थिए।
राष्ट्र बैंकले हिनामिनाको विषयमा पत्राचार गरेपछि मात्रै जानकारी पाएको बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्जुन बरालले बताए।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेपछि हामीले आन्तरिक छानबिन गर्यौं,’ बरालले भने ‘त्यसक्रममा जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईको आर्थिक हिनामिनामा संलग्नता देखिएपछि राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रहरी मोरङमा उजुरी दिएका हौं।’
जिल्ला प्रहरी मोरङले भट्टराईलाई मंसिर १९ मा नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ।
पक्राउ परेका भट्टराई ६ वर्षदेखि उक्त बैंकमा कार्यरत छन्।
उनले बैंकमा २०७१ सालदेखि रेमिट्यान्सतर्फको जिम्मेवारी हेरिरहेका थिए।
रेमिट्यान्सतर्फका प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा सिइओ नविन सुवेदीसहित अन्य ५ जना कर्मचारीहरू पनि शंकाको घरामा छन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार बैंकका सिइओ सुवेदी, लेखा वित्त प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, कर्जा प्रमुख विदुर पोखरेल, आइटी प्रमुख शशांक पोखरेल र अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगर पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
साविकको काबेली विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा गएर हाल सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लि. नामबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेको यो बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्था हो।
बैंकका निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकममा कुनै आँच नआउने अध्यक्ष अर्जुन बरालले बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १३, २०७८, ०१:५९:००